Ciidamada Soomaaliya oo qarax lagula eegtay Balcad - Sabahionline.com
Ciidamada Soomaaliya oo qarax lagula eegtay Balcad Juunyo 29, 2012
Qarax ayaa Jimcadi (29-kii Juun) ka dhacay maqaaxi ay ku sugnaayeen ciidamada Soomaalia iyo saaraakiil magaalada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe, Shabakadda Wararka Shabelle ee Soomaaliya ayaa warisay. Qodobbo la xiriira
26 qof oo lagu dilay muran beeleed la xariira dhul oo ka dhacay bartamaha Soomaaliya
Sida uu sheegay guddoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe Maxamed Jiinoow, ma jirto cid ku wax yeellowday qaraxa, inkastoo dad goob-joogayaal ahi ay sheegayaan in dhowr qof ay ku dhinteen weerarka, Shabakadda ayaa warisay. Jiinoow ayaa ka dalbaday dadka deegaanka in ay la shaqeeyaan ciidaamada ammaanka, si loo xaiijiyo amniga iyo dagganaashiyaha aagga. Ma jirto cid sheegatay mas’uuliyadda weerarka. Ciidamada Soomaaliya iyo kuwa Midowga Afrika ayaa Balcad al-Shabaab ka qabsaday todobaadkan iyagoon la kulmin wax iska caabbin ah. Muxuu kula yahay qoraalkan?